အမ်မလီ Dickinson ကိုးကား - ချစ်သူတို့ကဗျာများနှင့် selection
အမ်မလီ Dickinson (1830-1886)
အမ်မလီ Dickinson , သူမ၏တစ်သက်တာကာလအတွင်းအိမ်တွင်းပုန်း, သူမ၏သေသောနောက်၎င်း၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည်အထိမသိသောအနည်းငယ်ခြွင်းချက်နှင့်အတူသူမကပုဂ္ဂလိကစောင့်ရှောက်ရသောခဲ့ပြီးသောကဗျာရေးခဲ့တယ်။
Selected အမ်မလီ Dickinson ကိုးကားချက်များ
က short Quotes
•ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သူမျှမ Stranger တွေ့ဆုံရန်, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်
•စိတ်ကအမြဲ ajar ရပ်သင့်ပါတယ်။ အဆိုပါ ecstatic အတွေ့အကြုံကိုကြိုဆိုပါတယ်ဖို့အဆင်သင့်။
•ယင်း Soul သူမ၏ကိုယ်ပိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းရွေးချယ်
ငါဘယ်သူမှပေါ့! မင်းဘယ်သူလဲ? သငျသညျမြားမှာ - ဘယ်သူမှ - လည်း? ထိုအခါကျွန်တော်တို့ထဲကတစ်စုံရှိတယ်ပဲ! မပြောပါနှင့်! သူတို့ကြေငြာချင်ပါတယ် - သင်သိ! ဘယ်လို dreary - ဖြစ် - တစ်စုံတစ်ယောက်! ဘယ်လိုအများပြည်သူ - တဖားနဲ့တူ - တစ်တွေရဲ့ရန် Bog စေရန် - ထို livelong ဇွန်လ - တဦးတည်း၏အမည်ကိုပြောပြရန်!
ရောကျသောနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း break ။
တစ်ဦး chorister များအတွက် bobolink နှင့်အတူ,
တချို့က surplice အတွက်ဥပုသျစောငျ့;
အစားဘုရားကျောင်းများအတွက်ခေါင်းလောင်း tolling ၏,
ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းနည်း sexton သီဆို။
ဘုရားသခငျ, ဟောပြော - မှတ်စုခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာ, -
, ပေါင်တို့အတွက်ပေါင်, သူတို့ကိုရုတ်သိမ်းပေးရန်သည်
အသံကကနေ syllable အဖြစ်။
Gentlemen တွေ့နိုင်ပါသည်တဲ့အခါမှာ -
မြင်သောသူလူကြီးလူကောင်းသည် ဖြစ်. ,
ထိုအခါ gale အတွက်ငှက်ကလေးကြားရ၏
ငါ chillest ပွညျ၌ကကြားဖူးတယ်,
ထိုအခါ strangest ပင်လယ်ပေါ်မှာ;
သို့သျောလညျး, ဘယ်တော့မှမ, စှအတွက်,
သူဟာတမန်တော်အမှန်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံး ပြု. ,
ငါ့ကို abasheth အများကြီးအဖြစ်။
ဘဝရဲ့? '' T ကကျွန်မတစ်ဦးအရာကိုကွောကျရှံ့ထူးဆန်းခဲ့ကြသည်
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏? အရှေ့, Is
သူမ၏ fastidious နဖူးနဲ့လား
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ဘဝမှ anterior ဖြစ်ပါသည်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် - အသက်ရ anterior ဖြစ်ပါသည် -
Posterior - မရဏမှ -
သေ မှလွဲ. ; ဒီကျွန်တော်တို့ကို
'' t ကိုကဲ့သို့, Italicized ။
များလွန်း jostled ပြောဆိုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်တည်ကြသည် ဖြစ်. ,
ရေကွေး, ရှားပါး shivered
က short ကို select
'' shunning အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီး '' ၏• - သူတို့အားရိုအရာစကားပြောရန်, ကျယ်လောင်စွာ - နှင့်ငါ့ခွေးအရှက် - သူတို့ဘက်မှာတည်ရှိလိမ့်မယ်ဆိုပါကသူနှင့်ငါသည်သူတို့မှအရာဝတ္ထု dont ။ ငါ Carlo သင်နှစ်သက်သောမယ်လို့ထင်ပါတယ် - သူစကားမပြောနိုင်သောနှင့်သတ္တိဖြစ်ပါသည် - သင်တို့အားငါသစ်အယ်သီးပင်ချင်ပါတယ်ထင်ကျွန်မရဲ့လမ်းလျှောက်အတွက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဒါဟာရုတ်တရက်ငါ့အအသိပေးစာ hit - ငါကောင်းကင် Blossom ရှိကြ၏ထင် -
•ငါ့အအပေါင်းအဘော်သည် - ထိုတောင်တန်းများ - ဆာ - နှင့်နဝေငျ - နှငျ့တစ်ဦးခွေး - ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဖြစ်အကြီးစား, ငါ၏ခမည်းတော်သည်ငါ့ဝယ် - သူတို့သိသောကြောင့် - - သူတို့ကသတ္တဝါတွေထက်ပိုကောင်းပေမယ့်မပြောကြဘူး။
•ငါ့ကိုနောက်ကွယ်မှာ - ထာဝရ dips -
ငါ့ရှေ့မှာ - သေ -
ကိုယ့်ကိုယ်ကို - အကြား Term -
•ဆူ Gilbert က Dickinson အမ်မလီ Dickinson မှ 1861, တွင် "တစ် Nightingale စူးသောဆူး, အဘယ်ကြောင့်ငါတို့သည်ဆန့်ကျင်သူမ၏ရင်သားနှင့်အတူသီဆိုခဲ့လျှင်?"
ကျနော်တို့ setting နေရောင်လွန်။
အဆိုပါ cornice ပေမယ့်တစ်ဦးတောင်ပို့။
ထိုအချိန်မှစ. '' t ကိုရာစုနှစ်များစွာရှိ၏ ဒါပေမယ့်အသီးအသီး
ကျွန်မပထမဦးဆုံးမြင်း '' ဦးခေါင်းထင်မှတ်
သို့မဟုတျ, Part ကောင်းကင်သိပါအားလုံးဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်ကြီးမားသော, ပဋိသန္ဓေ ယူ. ဒါကူကယ်ရာမဲ့,
quote စုဆောင်းခြင်း Jones ဂျွန်ဆင် Lewis ကအားဖြင့်စုဝေးရောက်လာကြ၏။ ဒါဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကျော်စုဝေးကာအလွတ်သဘောစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ငါကကိုးကားနှင့်အတူစာရင်းမပြုလုပ်လျှင်ကိုယ့်မူရင်း source ကိုပေးနိုင်တော့မည်မဟုတ်သူဖြစ်ကြောင်းကိုနောင်တ။
"Pleurez! pleurez mes yeux!" သီချင်းစာသားနှင့်စာသားဘာသာပြန်စာပေ
ဂျပန်ကလေးများနေ့သီချင်း - Donguri Korokoro
အရောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် Sterilizing အတွက်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့အခန်းကဏ္ဍ
အီစတာကျွန်း၏ MOAI လုပ်များနှင့်လှုပ်ရှားကြ၏ဘယ်လို
အင်္ဂလိပ် Grammar အတွက်သွယ်ဝိုက်အရာဝတ္ထုများ၏အမည်ဆိုတာဘာလဲ
အဆိုပါ Maypole ၏သမိုင်း
အဆိုပါအသက် 15 ရယ်စရာအကောင်းဆုံးဟယ်ရီပေါ်တာ "Yo Mama" ဟာသ
ယောဟနျသ Tyler: သိသိသာသာအချက်အလက်နဲ့အကျဉ်းအတ္ထုပ္ပတ္တိ
ကို '80s ၏ထိပ်တန်း 8 XTC သီချင်းများ
Rift Valley ကို - အရှေ့အာဖရိက၏မဟာ Rift Valley ကို
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: Olustee ၏တိုက်ပွဲ